Maalqabeen 100 Malyan oo gini hadiyad ahaan u siiyay jaamacad uu horay u dhigan jiray - Aayaha
Aayaha editorFebruary 8, 2019
Nin bilyaneer ah oo lagu magacaabo David Harding ayaa deeq lacageed oo gaareysa 100 malyan oo gini ugu deeqay jaamacadda Cambridge.
Deeqda uu maalqabeenkan bixiyay oo uu soo marsiiyay hay’ad uu isagu leeyahay ayaa noqotay tii ugu weyneyd ee hadiyad ahaan loo gaarsiiyo Jaamacadda ku taalla waddanka UK, isla markaana uu bixiyo qof u dhashay Britain.
David ayaa horay u ahaa arday ka baxay jaamacadda Cambridge, isagoo hadiyaddanna uga dhigay mid lama filaan ah.
Lacagtan ayaa lagu maal galin doonaa deeqda wax barasho ee loogu tala galay dadka sii wadanaya waxbarashadooda heerka ugu sarreeya ee shahaadada PhD-da.
Waxaa sidoo kale loogu tala galay in lagu soo jiito ardayda ka socda kooxaha ay matalayaan.
David iyo xaaskiisa ayaa ka wada shaqeeya hay’adda
Ku xigeenka madaxa jaamacadda Barfasoor Stephen J Toope ayaa sheegay in tallaabada uu maalqabeenkan qaaday ay tahay mid aad u qiimo badan.
“Waa arrin qeyrul caadi ah oo ay naxariis ku dheehan tahay”, ayuu yiri.
Af hayeen u hadlay jaamacadda ayaa sheegay in deeqda ay bixiyeen David iyo hay’addiisa lagu magacaabo Claudia Harding Foundation ay ka caawin doonto sare u qaadista mashruucooda deeqda wax barasho oo ay u sameynayaan dhaqaale uruurin gaareysa 500 oo malyan oo gini.
Mr Harding ayaa aasaasay hay’adiisa ka qeyb qaadata maalgalinta caalamiga ah ee deeqaha wax barasho.
Xaaskiisa Claudia ayaa ka mid ah dadka uu ku kalsoon yahay ee la shaqeeya tan iyo markii uu dhidibada u aasay hay’adda.
£79 malyan oo gini oo ka mid ah deeqdan ayaa si toos ah loogu bixin doonaa deeqda wax barasho ee loogu tala galay 100 arday oo diyaarinaya shahaadada PhD-da, kuwaasoo qoritaankooda la guda gali doono laga billaabo bisha Oktoobar ee sannadkan.
Astaamaha Lagu Garto In Sodohdaa Aysan Ku Jecleyn